Ubaba kaSenzo udinwa yiculo likaKelly, uthi uyeyisa | News24
Ubaba kaSenzo udinwa yiculo likaKelly, uthi uyeyisa
Durban – Usephinde wagadla futhi kuKelly Khumalo ubaba walowo owayengunozinti we-Orlando Pirates kanye neBafana Bafana, uSenzo Meyiwa, ngenxa yeculo elitholakala kwi-albhamu entsha kaKhumalo, kubika iDaily Sun.
USam Meyiwa uthi ingoma esihloko sithi Senzo kwi-albhamu yalo mculi ethi My Truth, yenziwa uKhumalo ngenhloso yokucasula bona njengomndeni.
UKhumalo wayeyisinqandamathe sikaSenzo kanti ngosuku adutshulwa abulawa ngalo kubikwa ukuthi babendawonye ekhaya lalo mculi eliseVosloorus, eGauteng.
OLUNYE UDABA: Uyise kaSenzo Meyiwa embangweni wengane noKelly
“Iqhamuka kuphi le ntombazane? Ifunani kithina? Bungakanani obunye ubuhlungu efuna mina nomndeni wami sibuzwe?” kubuza ubaba kaSenzo, uSamuel Meyiwa, engeza ngokuthi kubukeka sengathi uKhumalo ujabule ngokuthi indodana yakhe yashona ukuze ezokwenza imali ngegama layo.
“Uyeyisa le ntombazane.
“Iqiniso esilifuna kuyena elokuthi ngubani owabulala indodana yami, hhayi ukuthi enze izingoma esingaziqondi.”
Kuthiwa ngesikhathi uMeyiwa enengxoxo neDaily Sun, umama kaSenzo uhlwithe ifoni naye ezwakala ethukuthele egane unwabu ngesenzo salo mculi.
“Uma ngabe uKelly Khumalo engumuntu olungile athi unguyena, kumele asitshele ukuthi kwenzakalani ngosoku okwashona ngalo uSenzo ngaphambi kokuthi enze izinto eziwumbhedo,” usho kanje.
Okhulumela uKhumalo, uLinda Moeketsi, uthi lezi yizinsolo eziqinile futhi bazoludlulisela kubameli lolu daba.